Faucets milentika ao an-dakozia Misintona nikela borosy
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Faucets milentika ao an-dakozia Misintona nikela borosy
Famaody mandavantaona any an-dakozia WOWOW Pull Down Nick Nick nopotehina
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 40 mpanjifa naoty
(40 mpanjifa famerenana)
Ny lavaka tokana lakana avo iray arc dia manana tombony manaraka ireto: fihodinana 360 degre, fanadiovana miovaova tsy misy zoro maty amin'ny làlana rehetra;
Mora kokoa ny rano ary azo ovaina malalaka ny rano mafana sy mangatsiaka;
Azonao atao ny mifehy ny hafanana amin'ny sitrapo. Ny fipoahana-porofo stainless vy nasiana hose, mora apetraka, mari-pana sy fanoherana fanoherana, fanoherana ny fahanterana.
2310700 fanitsiana torolalana
Kotroka ktchen miaraka amin'ny fantsom-panafody 2310700
Inona avy amin'ireo zavatra mampiavaka ny lakoziao? Betsaka no mety hamaly ny lakozia an-dakozia satria matetika no ampiasana ity entana ity in-droa isan'andro. Ankoatra izany, ny paompy an-dakozia dia matetika noheverina ho teboka voalohany amin'ny lakozia iray. Na inona na inona ny fomba ao an-dakozia. Noho ny antony iray dia voasarona amin'ny paompy an-dakozia ny sain'ny tsirairay. Antony lehibe kokoa hisafidianana paompy ankavanana ho an'ny fananganana an-dakozia vaovao. Ny safidy diso dia mety hialana amin'ny famolavolana ny lakozia rehetra, na azonao atao ny misafidy paompy an-dakozia izay tsy mifanaraka amin'ny safidinao izay antenainao amin'ny resaka. Farany, azo antoka fa tsy mijanona ho an'ny kalitao. Ny iray mora tazana hoe inona ny paompy an-dakozia kalitao ary iza no tsy misy.
Ahoana anefa no ahitanao ny kalitao? Tokony hampiasa lakozia an-dakozia mandritra ny taona maro ianao mba hahafahanao mitsara raha ny kalitaon'ny paompy an-dakozia no avo noho ny salan'isa na tsia. Azonao atao tsara ny manamarika izany miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny antoka izay omen'ny mpamokatra paompy an-dakozia anao. Ny mpamatsy iray izay manome antoka iray 1 taona dia mety hanantena olana sasany aorian'ny taona vitsivitsy. Noho izany dia tsy te-hanolotra vanim-potoana warranty lava kokoa izy mba hamonjy vola. Amin'ny lafiny iray, mpamatsy tapaka an-dakozia izay manome a
Ny vanimpotoana 5 taona, mahatoky ny vokatra azony ary tena te handray ny andraikiny amin'ny fanatanterahana izany mandritra ireo taona ireo. Mety hanontany ny olona, ​​maninona no tsy misy warranty 10 taona? Eny, ny fampisehoana lakana an-dakozia dia miankina amin'ny fampiasana azy, ny fikojakojana azy ary ny kalitaon'ny rano. Mety haharitra 10 taona mahery ny paompy an-dakozia, fa ny fikojakojana tsara sy ny fifehezana ny rano tsara kokoa no hiantoka ny fiaretana maharitra.
Esory ny paompy an-dakozia fametahana
Betsaka ny olona te hisintona paompy fisotroan-kafe mihoatra ny paompy hafa an-dakozia. Ny tena antony dia afaka manatratra ny toeranao na amin'ny manodidina ny fandroana an-dakozia ianao. Amin'izany fomba izany, ny fanadiovana ny lakozia anao dia tsy azo atao mora kokoa amin'ny paompy an-dakozia hafa. Miaraka amin'ny hidroan'ny rano dia azonao atao ny manitatra ny fahatongavanao miaraka amin'ny 32 santimetatra amin'ny andaniny. Miaraka amin'ny lakozia mahazatra ianao dia tsy ho afaka hahatakatra an'io elanelan-tany io, mety ho sarotra kokoa ny manadio. Amin'ity paompy fisintahana misintona ity dia hanadio ny lakozia amin'ny mason-javaboary ianao.
Ny tombony lehibe amin'ny fantsom-bolo mitambatra mitambatra dia ny hoe toa kanto izany ary toa tsy tsikaritrareo fa afaka miditra amin'ny hosotra rano efa ho 4'11 ianao ». Ity misintona horonam-baravarana an-dakozia vita amin'ny WOWOW dia hitovy amin'ny takelaka mahazatra an-dakozia. Na dia mijery akaiky aza ianao, dia zara raha hahita ny fahasamihafana amin'ny tsindry fandrefesana mahazatra. Saingy rehefa misintona ny lohan'ilay fantsam-baravarana ity ianao dia manaparitaka tampon-javamaniry varahina, dia tsikaritrareo tampoka fa misy hosoka rano azo averina eny an-tananao. Ary ho gaga ianao amin'ny halavany! Aorian'ny fampiasana hosotra ny rano dia miverina mandeha amin'ny toerany tany am-boalohany, toy ny tsy nisy nitranga. Ity fampiasa milamina fisintonana miaraka amin'ny hosotra misy rano ity sy ny counterweight dia natao tamin'ny fomba mahavariana, ho tsikaritra miaraka ianao.
Ny lakozia fikojakojana fako miaraka amin'ny fisintonana misintona
Iza no tia mitazona grc an-dakozia? Tsy misy olona maminavina. Na izany aza, dia toa tena matotra noho ny tena izy ny fihazonana. Miaraka amin'ny paompy an-dakozia, ny fikojakojana lehibe indrindra tsy maintsy ataonao dia ny manadio azy io tsara. Mazava ho azy fa tokony hanala maloto ny olona aorian'ny nahandro sakafo avy amin'ny paompy an-dakozia. Amin'ity fomba ity dia mitazona endrika milina tsara ianao. Tahaka ity dia mitohy ny havoakan'ny lakozia anao raha mbola vaovao izany. Ankoatra izany dia zava-dehibe ny manala ny sisa tavela amin'ny rano amin'ny lakan'ny paompy an-dakozia. Indrindra rehefa mipetraka ao amin'ny faritra iray mafy kokoa ny rano noho ny mahazatra. Midika izany fa ny rano dia misy tasy be dia be. Mamela ambin-javatra sisa eo amin'ny paompy an-dakozia aorian'ny fampiasana tsirairay. Tsy olana mihitsy izany, raha mbola manadio matetika izany ianao.
Raha tsy izany dia hanangana hatrany ny tsipika ary amin'ny farany dia tsy ho sarotra intsony ny manala azy intsony. Mety hisy fiantraikany amin'ny fanatontosana ny valva, levers ary ny hamafazana ny paompy an-dakozia. Indrindra rehefa manana rantsankazo fametahana rano ianao dia mety te hanadio fatratra ny lakozian'ny lakozia anao ankehitriny ary avy eo. Izany dia manome antoka fa ny sisa rehetra dia nesorina mora sy tsara mba hiantohana ny fampisehoana mivaingana ny fiainanao amin'ny fantsom-panafody misy rano.
Ny fiasa dia manintona ny paompy an-dakozia
Ankoatra ny fiasa, ity tsipika fisintahana horonana ity dia voalamina tsara. Ny endrika ambony arc dia manome endrika tsara tarehy sy fampiasana anao amin'ny fotoana mitovy. Ny fehin-tsolika vita amin'ny boribory dia manome fomba fampiasa amin'ny lakozia misintona ihany koa. Mety amin'ny trano fisakafoanana na trano fandraisam-bahiny izany, fa ao an-dakozia ao an-tsainao dia manome io fisandratana izay tadiavinao io.
Momba ny fiasa dia misintona andiana rano telo ny fampitaovana kaody fantsom-panafody misintona azy mba hanomezana anao ny fampiononana tadiavinao rehefa manadio ny lakoziazinao ianao. Azonao atao mihitsy aza ny miato ny rano mandeha amin'ny bokotra manokana eo amin'ny lohan'ny spray. Amin'izany fomba izany dia tsy mila mikitika ilay lever ianao raha te hihazona rano fotsiny segondra. Ny bika dia azo ampiharina miaraka amin'ny fanitsiana ny mari-pana sy ny tsindry amin'ny rano. Miaraka amin'ny fihodinana 360 degre an'ny paompy an-dakozia dia afaka miditra amin'ny toerana rehetra ianao.
Ny fampandosirana dia esory ny paompy an-dakozia
Ity baiko vita amin'ny rano ity dia vita amin'ny fitaovana varahina avo lenta. Noho izany, matoky i WOWOW hanolotra anao fe-potoana 5 taona ary antoka iray averina 90 andro. Ny fahatokisanay dia azo antoka fa handresy lahatra anao ny hasarobidin'ny vola atolotray anao amin'ny fantsom-baravarana an-dakozia.
Ny tombony amin'ny paompy an-dakozia miaraka amin'ny fisintonana fantsona amin'ny fomba fohy:
 Manome fahantona amin'ny lakozia rehetra
 Miakatra malalaka noho ny fisintonana misintona
 Famolavolana mahatalanjona sy minimalistic
 Fampiasa rano telo mora
 Teknolojia misintona tsara
SKU: 2310700 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: Pull out, Fitondrana tokana, price
Gaga aho tamin'ity vokatra ity. Mino aho fa vita sinoa io, fa teo anelanelan'ny faucet an-dakozia aho. Nosoloako faucet marika hafa ny faucet marika marika iray ary tsy maintsy nosoloiko ny tahony tao anatin'ny 2 taona noho ny fahatapahana. Herintaona latsaka taty aoriana dia nanao izany indray ilay mpitanina. Raha tokony handany 4 heny noho ny nataoko tamin'ity faucet ity dia nieritreritra aho fa hividy an'io fotoana io. Te hanana fotoana bebe kokoa amin'ny fikarohana aho, saingy mila faucet miasa. Rehefa tonga izy dia gaga tamin'ny kalitaon'ny fananganana, satria tsy latsa-danja noho ny kalitaon'ny fananganana amin'ny anarako marika iray. Ireo faritra dia fenitra tsara, saingy tsy heveriko fa safidy ny fividianana solony. Voalaza fa noho io vidiny io dia nieritreritra aho fa safidy azo ampiasaina ity rehefa tapaka. Raha maharitra herintaona aho dia ho faly. Hatreto aloha dia mbola mety tsara. Izy io dia niasa tsy nisy kilema ary ny fametrahana dia manara-penitra / mora ho an'ny olona mora raisina. Naharitra adiny iray teo ho eo ny fametrahana ahy, fa ny ankamaroan'ny fotoana lany dia ny manadio ao ambanin'ny fantsakana ary manala ny fantsona taloha. 2 volana teo ho eo no nanaovako an'io ary ny spray rano dia tsara amin'ny asany roa tonta. Satria lohany azo esorina izy ity, dia nanampy lanjany fanampiny koa aho mba hamatsiana azy io amin'ny sandan'ny faucet. Izany fanampiana izany dia azo antoka tsara ny lanjany, tsara lavitra noho ny faucet nataoko teo aloha izay solafaka foana. Zava-dehibe izany satria ny lohan'ny spayer dia tsy manana sprayer manetsika ary ny lanjany no miantoka azy. Amin'ny ankapobeny, faly aho amin'ny kalitaon'ny fananganana, ny kosmetika ary ny endri-javatra amin'ity vidiny ity. Sarobidy lehibe io. Manoro hevitra aho.
E *** O2020-07-02
Vao nosoloiko ilay mpanamboatra ahy faucet Moen ($ 260) tamin'ny WOWOW Kitchen Faucet Single Handle Kitchen Sink Faucets miaraka amin'ny Pull Down Sprayer ao amin'ny Brushing Nickel Commercial. Na dia vaovao aza (ny trano vaovao) ny Moen dia nahatsiravina ny fampiasana azy.
Ity WOWOW Faucet ity dia kanto, malama ary mora ampiasaina. Ny WOWOW dia singa vita tsara kokoa noho ny Moen ary amin'ny vidiny mifaninana tokoa. Ny fametrahana dia azo antoka kokoa ary tsy ho afaka.
Rehefa avy nandany 4 volana nitolona mba hahazoana ny mari-pana sy ny fikorianako isaky ny mampiasa ny fatana an-dakozia aho dia mitsiky aho fa mora ny mametraka ny mari-pana amin'ny rano sy mikoriana tsara miaraka amin'ny tahony malefaka sy marina.
Miasa toy ny manintona ilay mpitifitra misintona ary miverina any amin'ny vozona swan nefa tsy mila manosika azy hody,
ROA KINTANA REHETRA
Tonga haingana ilay Faucet Wowow ary nofonosina soa aman-tsara mba tsy hisy ho voarangotra na ho voafitaka. Mahafinaritra ilay faucet! Maoderina sy matanjaka izy io. Kalitao tsara sy sanda lehibe. Mora ny fametrahana ary ny faucet misy lavaka 3 dia mifanentana tsara amin'ny fantsonantsika taloha. Manome tsindry rano mahery kokoa koa io faucet io. Tiako fotsiny io! Hividy fantsona fanampiny ho an'ny trano fidiovana aho ary hijery an'ity orinasa ity voalohany satria nanolotra serivisy ho an'ny mpanjifa tena tsara koa izy ireo.
Ny anay taloha dia kely loatra ary tsy naninona. Mamono azy ity faucet an-dakozia ity. Hitako fa ity faucet ity dia mora kokoa noho ny ankamaroan'ny marika fanta-daza. Ny faucet dia tonga niaraka tamin'ny fonosana tanteraka sy ny torolàlana .Mora ny fametrahana ary mila ataonao am-paharetana tokoa izany. Ny lohan-tsifotra dia voatazona amin'ny alàlan'ny lanjany napetraka ao ambanin'ilay filentehana. Milamina sy milamina ny tsindry rano. Tsotra ny mifehy. Izy io dia lava. Izay no ampahany tianay indrindra. Tena mety ny manasa ny zava-drehetra.
64 taona aho ary efa nodidiana an-tenda 2 ka ny teo ambanin'ny kabinetra dia raharaha sarotra ho ahy fa tamin'ny naha-Marinina teo aloha dia tsy kivy mihitsy aho! Ataovy arak'izay azo atao ny miaraka alohan'ny hametrahana! Izany no fomba marani-tsaina!
Ento mivoaka ilay iray hafa dia manomboka manadio ny tampon'ilay faritra milentika ary mandehana miasa!
RAHA tsy mahay mandanjalanja ianao, olona mahay, satria tsy misy torolàlana tsara dia manome soso-kevitra amin'ny Plummer aho raha tsy izany dia azonao atao.
Faucet tsara tarehy sy mahafinaritra izy io! Tian'ny vadiko toa ahy koa izy. Ny faucet an-dakozia hafa dia naharitra 6 taona! Manantena aho fa haharitra ela kokoa ity iray ity, lava kokoa noho izy tsara kokoa namboarina!
Ity fantsom-pisakafoanana any an-dakozia ity dia mahatonga ny filentehantsika ambany rihana ho milentika toa maoderina. Mora ny mametraka ny faucet. Tiako ny fihodinan'ny 360 degre azoko sintomina hanasana ny zorony rehetra amin'ny labozia. Ary koa, ny fandidiana tokana dia manamora ny fiainako. Azoko atao ny manitsy ny hafanan'ny rano amin'ny fomba mahomby. Ho an'ny vidiny naloako dia mendrika ity faucet ity.
Ity faucet ity dia napetraka nandritra ny iray volana teo an-tranoko izao ary fanavaozana tsara ho an'ny lakozianay. Ny fametrahana dia tsy mora araka ny tokony ho izy satria fohy kely ny fantsom-pifandraisana- Tsy maintsy nahazo fantsona fanampiny aho ary niraikitra hahatratra ny fantson-drano
F *** ny2020-07-16
Ny faucet dia misy kalitao tsara, mavesatra, mafy, be cupreous ao anatiny (farafaharatsiny izay hitako), fantsona lava sy malefaka. Hahita haharitra hafiriana izany. Hiverina hanavao ny hevitro raha misy olana.
Hitako fa nampakatra horonan-tsary fametrahana izy ireo tato ho ato, izay mazava tsara. TSY MAINTSY mijery izany alohan'ny hametrahana.
Fetiko: Tsy mila mametraka miaraka amin'ny tahony eo akaikiny ianao. Raha ny tena izy dia aleoko sy apetraka amin'ny tanany eo aloha, tsy mbola misy olana. Nangataka olona hanampy ahy hametraka aho. Ny fametrahana raha ny marina dia tena mora. Fa ny olako dia ny tsy fananako fitaovana hampihena ny faucet tany am-boalohany, izay harafesina mafy.
Tena gaga aho tamin'ny faucet vaovao! Fantatro ihany fa ambany $ 130 izy ireo noho ireo marika marika fanta-daza ka tsy maintsy nanandrana aho. Tsotra ny fametrahana ary tsy mila miantso matihanina. Mandeha tsara ny faucet. Ho an'ny $ 70 dia tena tsy misy mitaraina firy.
R *** amin '2020-07-18
Nandoa toa $ 80 aho? Nahita faucet mitovy amin'ny $ 120 sy mihoatra aho. Nandany sy naharitra ora aho namoaka ilay taloha, nefa niditra 10 minitra teo ho eo izany. Tsy mazava ny toromarika, saingy nosoloiko mihoatra ny vitsivitsy ary tsy nilaiko. Mamonjy haingana, milanja tsara, toa mamy!
*** E E2020-07-20
Nampiasaiko hisolo ny faucet ao an-dakozako io. Mora ny fametrahana. Ny tantana tokana dia afaka mamono ny rano amin'ny toerana misy azy na mafana na mangatsiaka toy ny manohitra ny faucet taloha, nataon'i Delta, izay amonoana ny rano fotsiny amin'ny tahony ao anaty canter ihany ny rano. Azonao atao ny misafidy tsifotra na mahitsy ary bokotra hiatoana. Azonao atao ny manala ny spout na aiza na aiza ao anaty sinko mba ho mora diovina.
Raha eritreretina dia vokatra mamokatra ity. Nikelikely namboarina no namboarina, zavatra mitovy amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny zavatra iray tiako momba ny faucet dia ny fisian'ny fantsom-panafody izay azonao sintomina midina ho an'ny tanjona fampiasana maro. Mahazo aina ny tantanana. Fitaovana tsara ampiasaina amin'ny fantsona.
E *** O2020-07-21
Efa nametraka an'ity nandritra ny roa volana izao ary miasa tsara be. Mora be ny fametrahana azy ireo. Manana fotoana sarotra kokoa nanesorana ilay taloha. Ity iray ity dia napetraka tao anatin'ny minitra vitsy ary miasa tsara hatramin'izay.
Tena gaga aho tamin'ny faucet vaovao! Tsotra ny fametrahana ary tsy mila miantso matihanina. Tiako ny zava-drehetra momba azy io, ny famafazana spray, ny haavony, ny tosidran'ny rano nitombo be! Tsy afaka mamadika ny fipoahana feno aho rehefa mahandro satria hanao korontana be aho! Izy ireo koa dia manana fiantohana maharitra izay manaporofo ny fahatokisany fotsiny ny vokany.
Fametrahana mora dia tsotra, miaraka amin'ny torolàlana tsy misy ilana azy; mety tsy handefa torolàlana mihitsy. Amin'izay voalaza fa faucet tena tsara amin'ny vidiny tena lafo.
O M ***2020-07-24
Mora ampiasaina ity faucet ao an-dakozia ity. Ny kalitao koa tena tsara, mora ny mifehy ny fikorianan'ny rano. Mety be izy io raha ampiasaina, tiako be izany.
Nampiasa plumber aho hametrahana satria tsy nanana fitaovana manokana handravana ilay faucet taloha aho. Tiako ny fandidiana malefaka sy ny kalitaon'ity faucet ity.
A *** f2020-07-26
Ny faucet dia teknolojia avo lenta ary miasa tsara, ny fahaizana manitatra ny tadiny dia mahatonga azy io ho sarobidy kokoa ary ilaina amin'ny fanadiovana. Ireo fitaovana vita dia kalitao premium ary tsy mahita lesoka amin'ity faucet ity aho. Tena tiako izany!
Tiavo ity faucet ity. Manamboatra ny lakozianako aho ary misy faucet vaovao iray ao anaty lisitra. Ity faucet ity dia voaporofo fa ilay notadiaviko fotsiny.
Ny faucet-ko ankehitriny dia toa efa antitra sy lany andro, saingy tsy te handany taonina aho hanoloana azy. Faucets sy fixtures ary mahazo lafo, saingy io dia tena lafo vidy ary toa tsara lavitra noho ny safidy lafo vidy kokoa. Ny fametrahana dia nandany fotoana kely tamiko, fa amin'ny ankapobeny, tena faly tamin'ity vokatra ity.
Tsy maintsy nanitatra ny tsipika nataoko fa tao amin'ny trano taloha. Tsara kokoa ny vokatra raha ny noeritreretiko. Aleo lavitra ilay novidiko nilentika hafa tao amin'ny fivarotana fitaovana.
M *** f2020-08-04
Ny torolàlana dia mety ho nazava kokoa saingy nisy video youtube nanampy. Tsy nanana fanandramana teo aloha aho ary nahavita nahazo maso mainty niaraka tamin'ny tranainy fa tsara tarehy toa. Nampiasa nandritra ny volana vitsivitsy ary tsy nisy olana.
Faly be aho amin'ity faucet ity! Tsotra sy tsotra apetraka. Miasa tsara ary tsy misy mahatsapa ho mora vidy. Toa tsara ary miasa mahafinaritra! Mamporisika mafy!
E *** O2020-08-08
Tena tsara sy mora apetraka, toy ny loko, mifanandrify amin'ny vatako ao an-dakozako.
Tena mora ny mametraka Tiako fa manana piping 3/8 ′ izy io ka tsy mila miahiahy momba ny fanakanana azy amin'ny sokay na kalsioma ianao, toy ny ataon'ny mpanangona rano vaovao.
manana faucet an-dakozia taloha aho, ary soloiko fotsiny, tiako be ity faucet ity, mora ny mametraka azy afaka manao izany ho anao ianao ary manana sanda tsara.
Gaga be! Tiako ny famolavolana, ny fijery sy ny fahatsapana ny fampiasa amin'ny faucet. Ny sprayer namboarina dia tsara !! Tsikaritro ihany koa fa ny tsindry rano dia tsara lavitra noho ny faucet teo aloha izay tsy nampoizina.
Mora ny fametrahana. Hanoro hevitra an'ity faucet ity ho an'izay mikasa hividy azy aho.
Nahazo ilay faucet aho andro vitsivitsy. Nametraka azy ny vadiko omaly. Fametrahana tena tsotra. Fifampiraharahana tsara izany. Apetraka eto amin'ny fantson-dakozianay ity faucet ity. Tsy misy mivoaka na mihantona. Tianay izany.
Faucet mahafinaritra ho an'ny vola !! Tsy misy olana mampiditra antsika. Miasa tsara ary tena mora ampiasaina.
Torolàlana farafahakeliny hanamafisana ny fizotry ny fametrahana na izany aza, ny faritra rehetra dia mifandray tsara ary ny asa rehetra dia tsara.
C *** f2020-08-22
Nividy ity faucet ity tokony ho enim-bolana lasa izay ary tena afa-po tamin'ny fomba fiasan'izy io ary tena tsara tarehy
L f ***2020-08-25
Nandinika aho talohan'ny nividianako azy. Ny tsipika mafana dia fohy kokoa noho ny ankehitriny misy ahy. Tsy misy olana, nahazo extension izahay tao amin'ny Ace. Tsotra ka soloina. Toa tsara izany, mahery ny mikoriana. Manoro hevitra an'ity faucet ity aho.
Vokatra ankapobeny tsara amin'ny vidiny. Mora mivoaka ny nozera. Nanana fametahan-kazo izahay satria ny fantsonay dia nanakaiky ny rindrin'ny kabinetra.
Tsy azonay antoka tamin'ny voalohany satria mbola tsy naheno an'ity marika ity izahay fa nanapa-kevitra ny hanandrana mifototra amin'ireo hevitra tsara rehetra. Faly be izahay amin'ity faucet ity. Tsara ny kalitao, tsara ny mijery, mihetsika tsara, vidiny lafo ary fonosana lehibe. Efa iray volana teo ho eo izao no nahazoantsika izany ary tsy ho sambatra kokoa isika.
Mila manolo ny faucet ao an-dakozia taloha aho ary mieritreritra aho fa ity no safidy mety indrindra. Izy io dia misy takelaka loaka 3 ho an'ilay taloha. Misy horonan-tsary amin'ny pejy wowow hanome torolàlana ny fomba fametrahana. 15 minitra fotsiny vao vita tanteraka ny fametrahana. Milamina sy matanjaka tokoa ny fikorianan'ny rano.
Tena mifantina aho, manao fikarohana be dia be ary mirona hitady marika anarana fa tsy any ambanin'ny tsipika, noho izany dia nanao fikarohana tsara be aho talohan'ny nanampiako an'ity marika tsy fantatra ho ahy ity amin'ny lisitr'ireo marika malaza endrika mitovy amin'izany maherin'ny avo roa heny na intelo ny vidiny. Ahiahy roa hafa: 1. Nisy famerenana vitsivitsy nilaza fa ny fihemorana dia tsy nihemotra ary niverina tany amin'ny toerana mety, nahantona havia. Tena olana fametrahana izany. Misy lanjany mila ahitsy, izay somary mora, avy eo mandeha tsara. 2. Loko - ny sary dia nampiseho azy ho toy ny loko volondavenona vita amin'ny vy vita amin'ny vy, fa vita amin'ny nickel borosy, izay mety manana loko mafana sy marevaka izay noresahiko fa tsy hifanaraka amin'ireo fitaovana SS. Tsy hitako izay tsikera milaza an'io lafiny io na amin'ny fanontaniana, ka nametraka ilay fanontaniana aho ary nahazo valiny lehibe manome toky ahy fa tsy manana loko mainty izy ary hiasa tsara amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony. Tena torohevitra tsara izany, misaotra an'ireo olona nanokana fotoana hamaliana ny fanontaniako, tsy diso fanantenana aho. Ity dia vokatra manana kalitao matanjaka, mahafinaritra ny endrika amam-bika sy ny fantsom-panafody, tsy nadio toy izany aho! Ny hany zavatra tsy haiko miresaka dia ny lava lava satria iray volana monja izy io, fa amin'ny ankamaroan'ny faucet an-dakozia, dia ampiasaina tsy tapaka izy io, ary tsy manana antony hieritreretana aho fa tsy hitovy amin'ny marika lafo kokoa. Safidy lehibe, mankanesa ao, vonjeo ny $, faly aho manolo-tena amin'ny kintana 5.
Taorian'ny famerenako azy tany am-boalohany, nifandray tamiko ny serivisy mpanjifa mba hanampy amin'ny fanoloana ilay faucet tsy mety na dia efa nandalo ny varavarankely WOWOW aza aho. Noho ny fanampian'izy ireo dia nahavita nanamboatra ilay faucet aho fa nandritra izany fotoana izany dia nanambara mpandefa solo izy ireo raha toa ka tsy vitako ny nanamboatra ilay voalohany. Ny olana dia ny mekanisma fikirakirana anatiny no namela ny tahony nifindrafindra nanitsy ny maripana fa tsy miakatra sy midina hanokatra ny rano mikoriana. Nila nesorina sy napetraka indray izy io mba hiasa tanteraka. Ny faucet izao dia miasa araka ny nampoizina ary ny fijery no tena tadiaviko. Kintana 5 ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ity orinasa ity!
Original: tsara tarehy ity faucet ity ary marina ny vidiny, indrisy tsy mandeha izy. Tsy misy rano mivoaka. Mivezivezy mankamin'ny sisiny ilay tahony mba hiova eo anelanelan'ny mafana / hatsiaka fa tsy mihetsika ambony sy midina hanokatra ny faucet. Nahita fanehoan-kevitra sy fanontaniana hafa momba ny tsy fisian'ny rano aho ka heveriko fa mety ho olan'ny fivoriambe amin'ny zavatra sasany izany. Ny fifandraisana rehetra dia voahidy tsara ary nivadika ny valizy famitana. Ho porofo fanampiny fa nisy ny rano ary nisy dia tsikaritro fa nisy rano nitete avy tao amin'ny fantsom-pifandraisana taorian'ny nanaparitako ilay fantsona. Hatramin'ny nividianako azy roa volana lasa izay ho an'ny fanavaozana ny efitranon'ny fanasan-damba izay vao vita dia tena diso fanantenana aho fa tsy afaka mampiasa ity faucet tsara tarehy ity ary izao dia nifarana ny varavarankely miverina ka toa voafikitra amin'izany aho.
Vao tsy ela akory izay dia maty ny faucet ao an-dakozianay ary nanafatra ity faucet ity ho solony izahay, faly fa handray azy io haingana ary afaka mametraka azy io amin'ny faran'ny herinandro izao mba hahafahanay manohy mampiasa ny fatana an-dakozianay. Na izany aza, rehefa nosokafanay ilay boaty, dia nahatsikaritra fikorontanana lehibe avy hatrany tamin'ny faran'ny farany teo amin'ilay ampahany lava tamin'ny faucet. Azo antoka fa olan'ny QC ity satria ho harafesina ihany ny tohiny, tsy hadino fa toa ratsy be io. Kivy izaitsizy tokoa izahay satria tsy mampiasa fatim-patsy an-dakozia intsony izao mandra-pahazoantsika iray hafa. Fanelingelenana lehibe io. Tsy mino aho fa zavatra toa izao dia tsy tratra nandritra ny fizahana kalitao alohan'ny namonosana sy fandefasana ny vokatra! Very fanantenana tokoa izahay satria tena nanantena ny hametraka ity faucet ao an-dakozia ity ary hipetraka sy hihazakazaka indray!
Fanavaozana: nohavaozina ny famerenantsika tamin'ny kintana 1 ka hatramin'ny 5 noho ny serivisy mpanjifa tsara azonay taorian'ny nandefasana ny fanadihadihana voalohany. WOWOW angamba no serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra azontsika avy amin'ny orinasa rehetra. Nandefa faucet tsy misy kilema tamin'ny alàlan'ny mpandefa iraka DHL avy any Chine izahay izay tonga tao anatin'ny andro vitsivitsy ary koa takelaka kely iray, avy any Shina ihany koa amin'ny alàlan'ny DHL. Vantany vao tafapetraka ilay faucet dia tena tianay izany, tsara tarehy sy miasa tsara. Indray mandeha indray, WOWOW dia tena nandeha tany ambony sy taty aoriana mba hanao an'ity scenario ity ho anay ary tena talanjona tamin'ny serivisin'izy ireo izahay.
Z *** ny2020-09-22
Ity faucet ity dia soloina singa iray an'ny "marika" marika tokana misy 15 taona miaraka amin'ny lohan-tsifotra manintona. Ity fantsom-panafody ity dia nanomboka nanaparitaka ireo valizy valizy tao amin'ny vatana faucet ary tsy nanandrana nanamboatra azy ireo aho. Nandany 2.5 - adiny 3 tamin'ny fitrandrahana ilay singa taloha… ny harafesina sy ny kofehy nesorina dia nahatonga io ampahany amin'ny asa io ho saika tsy azo esorina. Izany sy ny famolavolana mekanika ratsy an'ny singa taloha dia natao ra, hatsembohana ary ranomaso be avy amiko.
Mifanohitra amin'izany, napetraka sy notsapaina tao anaty 35 minitra ilay faucet vaovao. Rohy misy kofehy roa ho an'ny fampidirana mafana sy mangatsiaka ary fifandraisana iray misy kofehy lehibe ho an'ny faucet hilentika interface… voila, vita.
Alao antoka ary ampio ny teflon tombo-kase ao amin'ny fifandraisana mafana / mangatsiaka; tsy tafiditra ao anaty fonosana. Ny torolàlana dia voasoratra ao amin'ny kinova iray izay toa Outer Mongolianina nadika tamin'ny teny anglisy izay mety hiteraka fikorontanan'ny cerebral ao am-pianarana mpampianatra fitsipi-pitenenana rehetra, izany hoe "Famaranana ny fametrahana ary tsy mitete ny fitsapana na tsia." Soa ihany ireo sary fa tena tsara ka mahatonga ny ampahany am-bava tsy tokony hihoarana… nefa mampihomehy ihany.
Ny zava-drehetra dia nampidirina tao anaty fonosana (afa-tsy ny kasety famehezana); takelaka escutcheon, gasket cadre, allen wrench, ary 3/8 ka hatramin'ny 1/2 adaptatera ho an'ny fifandraisana mafana / hatsiaka (raha ilaina)
Taorian'izay rehetra nolazaina fa ny faucet vaovao dia tena miasa ary fanatsarana tsara toa ilay taloha. Hanoro hevitra anao aho ary hanampy fa ny vidiny dia manodidina ny $ 75 - $ 100 latsaky ny mitovy anarana marika. Raha maharitra izany raha mbola ilay nosoloina dia ho faly aho.
*** B E2020-09-24
Tena gaga aho tamin'ny faucet vaovao! Tena nila mafy aho ary tsy nahalala na inona na inona momba ny faucet, marika marika vitsivitsy fotsiny. Tamin'ny fikarohana nataoko dia hitako ny WOWOW ary ny famerenana rehetra dia miavaka. Fantatro ihany fa 100 $ latsaky ny marika marika fanta-daza izy ireo ka tsy maintsy nanandrana aho. Tsotra ny fametrahana ary tsy mila miantso matihanina. Tiako ny zava-drehetra momba azy io, ny fantsom-panafody, ny haavony, ARY nitombo be ny tosidrako! Tsy afaka mamadika ny fipoahana feno aho rehefa mahandro satria hanao korontana be aho! Avelao aho hilaza aminao rehefa manana fivarotana goavana ny Home Depot 4 andro aorian'ny nametrahako ny faucet vaovao nataoko fa tsy nalaim-panahy hijery akory aho. Izy ireo koa dia manana fiantohana maharitra izay manaporofo ny fahatokisany fotsiny ny vokany.